Indlu eyakhiwe ngamapulangwe e-Woodbury Lake - I-Airbnb
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe e-Woodbury Lake
Woodbury , Vermont, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Anita
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe enhle echibini lase-Woodbury. Kunemibhede engu-4 ephansi kanye no-1 phansi, ifanele abantu abangu-6 abanendawo evulekile. Unombono omuhle ukusuka kuvulande one-sunsets enhle. Kukhona ama-kayak nama-canoe ongawasebenzisa engcupheni yakho:-) Kunokuningi ongakwenza echibini lonke ihlobo, imvamisa ibhendi ebukhoma ngeSonto ntambama umculo ezindaweni zokukhempa ezingomakhelwane nemisebenzi yasechibini ejabulisayo. Sinikeza amathawula nezinto zokugeza, amashidi ahlanzekile. Ama-vest okuphila namanzi ayatholakala kanye namanzi asemanzini.
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe esechibini lasemaphandleni! Woza ujabulele imisindo ethulile yemvelo futhi udlale emanzini ahlanzekile acacile aseWoodbury Lake. Izitebhisi eziya ku-loft zithuthuka kancane ngakho kulabo abahamba ngezitebhisi eziphakeme sicela uqaphele lokhu. Indlu eyakhiwe ngamapulangwe ingeyasemaphandleni ngakho akuyona indawo yokuhlala yesigaba sokuqala kodwa uma ujabulela ukukhempa ngasechibini khona-ke lena yindawo yakho. Sihlezi sihlinzeka ngamashidi namathawula ahlanzekile echibini.
Ikamu lisegqumeni futhi kukhona indlela ekhuphukayo eya ekamu. Sivame ukubuyela emuva emotweni yethu ngqo emphemeni obheke echibini bese kuba nezinyathelo ezimbalwa nje zokuya ekamu.
4.75 · 10 okushiwo abanye
Kunesitolo sokudla cishe amamayela ayishumi ukusuka ekamu eliphethe izidingo zakho eziningi. Ikamu kanye namanye ichibi atholakala emgwaqweni abanye abagibeli bamaloli abayithathayo ukuze ekuseni uzwe amaloli amakhulu edlula.
Noma nini sitholakala ngocingo, nge-imeyili noma ngomyalezo.